စာရေးကိရိယာအိတ်၊ အလှကုန်အိတ်၊ ကွန်ပြူတာအိတ် - Camei Ele & Stationery
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဓိကအားဖြင့်လက်ရာနှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် - ကြိမ်နှုန်းမြင့်လက်ရာများတွင်အိတ်များ၊ လက်စွပ်ခလုတ်များ၊ ကလစ်ဘုတ်များ၊ ခဲတံအိတ်၊ သိုလှောင်မှုအိတ်များ။ အစုရှယ်ယာများ၊ ဇစ်ကြိုးများ၊ ခဲတံအိတ်၊ ဈေးဝယ်အိတ်၊ အလှကုန်အိတ်၊
အခြေခံအချက်အလက်များအမှတ် NO .: 3181 ခဲတံအိတ် ...
အခြေခံအချက်အလက်များအမှတ် NO .: 3179 Double Zipper Pe ...
အခြေခံအချက်အလက်အမှတ် NO: 3188 ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ ...
3154 ဓာတ်ပုံ Frame
အခြေခံအချက်အလက်အချက်အလက်များအမှတ် ၃၁၅၄ Photo Frame ...
အခြေခံအချက်အလက်အမှတ် NO: 3140 သိုလှောင်အိတ် ...
အခြေခံအချက်အလက်အမှတ် NO ။ : 2985 ခဲတံအိုး M ...
အခြေခံအချက်အလက်အမှတ် NO ။ : 2952 အစုစုကို Ma ...
အခြေခံအချက်အလက်အမှတ် NO .: 2806 အစုစုကို ...
Quanzhou Camei စာရေးကိရိယာအိတ်ကိုအိတ်များနှင့်စာရေးကိရိယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းတွင်အထူးပြုသည့်စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001, BSCI, SEDEX ၏အောင်လက်မှတ်များနှင့်နိုင်ငံခြားနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် (Walmart, Office Depot, Disney စသည်တို့) ၏စစ်ဆေးမှုများကိုအောင်မြင်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဓိကအားဖြင့်လက်ရာနှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် - ကြိမ်နှုန်းမြင့်လက်ရာများတွင်အိတ်များ၊ လက်စွပ်ခလုတ်များ၊ ကလစ်ဘုတ်များ၊ ခဲတံအိတ်၊ သိုလှောင်မှုအိတ်များ။ အစုရှယ်ယာများ၊ ဇစ်ကြိုးများ၊ ခဲတံအိတ်၊ စျေးဝယ်အိတ်၊ အလှကုန်အိတ်၊ ကွန်ပြူတာအိတ်စသဖြင့်ချုပ်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုစွမ်းရည်များကိုလွတ်လပ်စွာထားပြီး၊ စာရေးကိရိယာအိတ်အမျိုးမျိုး၊ ဥရောပ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်စသည့်နိုင်ငံများနှင့်ဒေသများသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းသည်နိုင်ငံတကာတွင်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။
တည်ထောင်ချိန်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောနိယာမကိုပထမ ဦး စွာလိုက်နာပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတင်းနှင့်ဖောက်သည်အသစ်များနှင့်ဟောင်းနွမ်းသူများကြားတွင်တန်ဖိုးရှိသောယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဥရောပ၊ အမေရိက၊ အရှေ့တောင်ဘက်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများအပါအ ၀ င်ပြည်တွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမာဓိရှိခြင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောမိတ်ဆွေဟောင်းများနှင့် လက်တွဲ၍ မနက်ဖြန်ကျွန်ုပ်တို့၏တောက်ပသောတည်ဆောက်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဆန္ဒရှိသည်။